Inona ireo fomba ahafahana mahazo ny rindran-damba tsara raha tsy mividy azy an-tserasera?
Andriamatoa Backlinks dia mitana anjara toerana manan-danja amin'ny fikarohanam-pikarohana fikarohana rehefa manao tranokala hita ao anaty milina fikarohana izy ireo ary miteny amin'i Google momba ny fahefana an-tranonkala ary manan-danja. Na dia tanteraka tanteraka aza ny fanatsarana ny pejy ao amin'ny pejy, dia tsy ankasitrahan'ny mpamorona sy mpampiasa izany raha tsy ampahafantarina ny pejy SERP voalohany. Raha manam-pahaizana SEO maro no manoro hevitra amin'ny famoronana votoaty lehibe ho fomba iray ahafahana mahazo traikefa be dia be, ny ankamaroan'ny tompon-tranonkala dia mamintina fa ny votoatin'ny kalitaon'ny tenany dia tsy fahita firy. Tokony hanampiana mandrakariva ny fanentanana fananganana rohy matanjaka.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'ireo fomba izay manampy amin'ny famerenana ny rindran-tsavily tsara tsy ilazana ireo fomba mainty hoditra tadiavina toy ny fividianana backlinks amin'ny internet.
Ampifanaraho amin'ny tranokala HARO
HARO (Manampahaizana Mpanao gazety iray) ny serivisy izay mampifandray ireo mpanao gazety amin'ny manam-pahaizana sy mpanoratra. Satria matetika ireo lohandohan'ny mpanao gazety dia mitanisa ny loharano azonao, dia azonao atao ihany koa ny mahazo teny fohy na kalitaon'ny backlink avy amin'ny tranonkala mpamorona nefa tsy mividy backlinks amin'ny internet. Amin'ny fampidirana fitaovana hanampiana fitaovana reporter Out ianao dia manomboka mailaka isan'andro avy amin'izy ireo, izay ahitana ireo mpanao gazety rehetra mila loharanom-baovao.
Mitady ny votoatiny amin'ny tsenanao
Fomba iray hafa ahafahana manadina bakalorea tsara dia ny fitadiavana votoaty izay mitondra ny loha-hevitra tahaka anao. Ankoatra izany, tokony handinika tsara ireo loharanom-pampianarana mifototra amin'ny lohahevitra ianao ary manolotra ny tranokalanao amin'ny mpanoratra lahatsoratra. Ny fomba tsara hahitana izany votoaty izany dia ny hanaovana fikarohana ara-barotra amin'ny fampiasana ireto fampifangaroana manaraka ireto: "bilaogy tsara indrindra tamin'ity taona ity," "bolongana tsara indrindra hamakiana" sy ny sisa. Mba hahitana rindranasan'ny rohy, azonao atao ny mametraka ireto fanalahidy manaraka ireto: "ny teny filamatrao" + "rohim-pifandraisana", "ny teny filamanao" + "tsara indrindra. "Raha mikaroka loharanom-pampianarana ianao, dia afaka mampiasa fampifangaroana toy ny" habaka:. edu "ny teny fikarohana," "tranonkala. : edu: "ny teny fikarohana nataonao" + "tranonkala hafa. "
Indray mandeha ianao dia hahita lahatsoratra iray izay mifanaraka tsara amin'ny raharahanao; Tokony hifandray amin'ny mpanoratra ianao ary manolotra ny tranokalanao. Tsara ny manana fanamafisana tsara ny mpanoratra raha vao manolotra ny votoatiny. Ho ela velona dia hanampy anao hanangana fifandraisana tsara amin'ny olona ity olona ity.
Mandray anjara amin'ny famoahana hafatra amin'ny bolongana malaza
Tsy asa sarotra ny manjary mpanoratra vahiny ao amin'ny tranonkala sarobidy. Ny fanalahidy dia ny mifikitra amin'ny tsenan'ny marika izay fantatrao tsara. Tokony hanome ny mpamaky amin'ny votoaty manampy anao ianao ho manam-pahaizana amin'ny orinasa misy anao. Loharano ahafahanao mamoaka ny hafatrao ao amin'ny blôginao izay mety ho hitanao ao amin'ny Google hampiditra ireto combina manaraka ireto - "lohahevitra" + mailakao; "Lohahevitra" + mpanoratra vahiny sy ny sisa. Raha mahita loharanom-pahefana mifanaraka amin'izay ilainao ianao, ny dingana manaraka dia ny mifandray amin'ny tompon'ny bilaogy ary mangataka ny hanoratra ho azy.
Mitadiava rohy mifototra
Atombohy amin'ny fitadiavana rohy mifandray amin'ny tsenanao ny sainao ary soso-kevitra ny rohy ho toy ny fanoloana tena tsara ho an'ireo rohy izay dia tapaka amin'izao fotoana izao. Na dia izany aza dia tsy mora ny mitady finday mifototra raha ny orinasanao dia mifototra amin'ny tsenan'ny tsenan-tsarimihetsika marefo. Mba hahitana rohy tapaka dia azonao atao ny mampiasa ireto fanontana manaraka ireto - ny "keyword" anao "+"; "Ny tenim-bavanao" + rebranded sy ny sisa Source .